Ulawulo lokufikelela kwiRFID
Itekhnoloji yeRFID inceda izazinzulu zifunde isincoko
Ukucaciswa ngumba ophambili kwicandelo le-biology yendaleko, kwaye indlela ebalulekileyo yokuchazwa kwe-hybrid speciation. Xa uGqirha Tobias Marczewski kunye noMphandi onxulumene naye u-Ma Yongpeng babefunda ukwakheka kweentlobo kunye nokungena kwemfuza kummandla wendalo we-Lantana camara kunye neRho ...
I-China Southern Airlines isebenzisa ngokupheleleyo iithegi zemithwalo yeRFID kwiindiza zayo eziphuma eGuangzhou
Unokuchonga ngokuzenzekelayo iithegi ezininzi ze-elektroniki ngaxeshanye Kuyaqondakala ukuba umgaqo wethegi yemithwalo yeRFID kukusebenzisa itekhnoloji yokuchonga amaza erediyo yeRFID. Olona phawu lukhulu kukuchonga ngokuzenzekelayo iithagethi kwaye ufunde kwaye ubhale idatha ehambelana nayo ngemiqondiso yerediyo, wi ...
Ukuvela kwenkqubo yokulandela umkhondo kwetekhnoloji ebandayo ye-RFID kuzisa amathuba amatsha kwikhonkco elibandayo
Imigangatho yokuphila yabantu iphuculwe kwaye imveliso entsha sele iyimveliso ebango eliphezulu. Ukudityaniswa nokutsalwa bubhubhane, izinga lokuvezwa kwemveliso entsha lonyukile kwaye ukuxhomekeka kwabasebenzisi kwimveliso entsha kunyukile. Ukongeza, ngokufumaneka esidlangalaleni d ...
Itekhnoloji yeRFID inceda ukuhanjiswa kwecuba
Njengobuchwephesha bokuchonga obuchanekileyo, obukhawulezayo nobulula, itekhnoloji yeRFID inoluhlu olubanzi lwezicelo kumashishini ahlukeneyo. Imizi-mveliso yecuba yazisa itekhnoloji yeRFID kwinkqubo yokulungiselela icandelo lecuba, ikakhulu ukuphucula ukusebenza kwe-tobac ...
Alithandabuzeki elokuba i-coronavirus iye yaba yingxaki yehlabathi. Ukuthintela ukosuleleka, abantu baye bayiqonda ngakumbi impilo yabantu, ekhokelele ekunyukeni okukhulu kwimfuno yeemveliso zezempilo kwezi nyanga zimbalwa zidlulileyo. Ngenxa yokunqongophala konikezelo, inkohliso kunye ne-infe ...
Kwifektri, iimoto ezihambayo zinokudibana nabantu abahambahambayo. Ke ngoko, iRekresco ifake i-alamu esondeleyo kwifektri yayo ukunciphisa umngcipheko weengozi ezinjalo. Iindaba zeGargoo zeZithuthi Ngaphandle kokungeniswa ngempumelelo kweetekhnoloji ezintsha kunye neendlela ezingcono zokusebenza, collis ...
I-RFID isinceda ukuba sidanise ngaphambi kobhubhane
Njengokuba i-United Kingdom ihlaziye amanyathelo ayo okuthintela, i-circus yeeklabhu yasebusuku yaseLiverpool yaphehlelela umsitho ongashukumiyo ongafuneki ukuba ulandele amanyathelo okwehla koluntu. Esi siganeko sixhomekeke ekufumaneni kweCovid-19 ngaphambi nasemva komsitho, kwaye sanikezela ngendawo ekhuselekileyo ...
Ngaphakathi iMongolia yamkela itekhnoloji ye-RFID yokujonga ilori yeetanki zemithwalo yeemithwalo
Nge-5 kaSeptemba, iprojekthi yenzululwazi nethekhinoloji "Ulawulo lweTanki yeTanki yokuPhatha, ukuHlola, kunye nokugcwalisa i-Intanethi yeZinto zoPhuculo lweNkqubo yoPhuculo kunye nokuSebenza" kubhengezwe liZiko laseMongolia lokuHlola iBoiler kunye nokuQiniseka ...
Ii-RFID terminals eziphathwayo ziya kudlala indima enkulu kulawulo lwamashishini amayeza
Njengesixhobo esikhawulezayo sokuqokelelwa kwedatha, i-RFID i-terminal ephathekayo idibanisa umsebenzi kunye neshishini lokuqokelela ulwazi olwahlukeneyo njengonyango, ukuqonda umsebenzi okrelekrele kunye nolawulo, kwaye ngokuthe ngcembe iba sisixhobo esibalulekileyo sokuqokelela ulwazi kwezonyango nakunesi ...
I-AIM isungula imilinganiselo yokuvavanywa kokuphazanyiswa kwezixhobo zeRFID yezixhobo zonyango
Umbutho wecandelo lokuzazisa oluzenzekelayo kwihlabathi liphela I-AIM iphehlelele inqanaba lakutsha nje "loVavanyo lwezoNyango zoMbane kunye neRFID Reader System yoVavanyo loMbane". Lo mgangatho ubonelela ngesikhokelo sobuchule kuvavanyo lwezixhobo zonyango ezinganyanzelwanga ukuya ...
I-RFID yococeko lokusingqongileyo kunye nolawulo lwezothutho ukwenza iqonga lokwakha elilumkileyo
Ngophuculo oluqhubekekayo lomgangatho wobomi, ukukhuselwa konxibelelwano kuye kwaqiniswa ngokuqhubekayo, kwaye ukubaluleka kwesebe lezococeko kuye kwanda ngakumbi. Ngenxa yokwakhiwa ngokukhawuleza kweedolophu kunye nokusikelwa umda kubuchwephesha okanye kulawulo, iSebe ...
Ukuthetha ngemeko yangoku kunye nekamva lobuchwephesha beRFID
Ingcinga "ye-Intanethi yezinto" yavela e-China e-2009, kwaye ibiyiminyaka esi-7. Ngeli xesha, ukuvela kweekhonsepthi ezintsha ezinje nge "Industry 4.0 ″ kunye" neInternet + "kuhlala kusonakalisa umbono wethu wetekhnoloji yanamhlanje. Ukuhlawulwa ...